Tag: habka suuqgeynta | Martech Zone
Tag: habka suuqgeynta
Saddexda Furaha ee lagu Xallinayo Dhibaatada Teknoolojiyadda Weyn ee Suuqgeynta
Khamiista, Oktoobar 25, 2018 Khamiista, Oktoobar 25, 2018 Justin Gray
Had iyo jeer badiyaa, tiknoolajiyada waxay noqotaa shaqsiyadda guusha. Aniguba dambiile ayaan ku ahay. Tiknoolajiyaddu way fududahay in la iibsado sidaas darteed, waxay dareemeysaa sidii cusbooneysiin deg deg ah! Tobankii sano ee ugu horreeyay sannadihii 2000-meeyadii waxay ku saabsanaayeen soo-galid, sidaa darteed waxaan ugu tartarnay dhanka suuq-geynta suuq-geynta gacmo furan, iyadoo laga dhex tuuray amarro wax iibsasho iyo hagitaanno hagaagsan - waan ka maqnayn oo waxaan la soconnay barnaamijkeenna cusub. Waxaan dharbaaxnay indhoolayaasha markii ay timid